अन्तर्वार्ता | Everest Times UK | Page 12
गोर्खा कपमा १० हजारभन्दा बढीको उपस्थिति रहने छ : संयोजक क्या. गुरुङ
नेपाली समुदायबीच बेलायतमा निकै लोकप्रिय रहेको गोर्खा कप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो २७ मे २०१८ का दिन अल्डरसटस्थित क्विन्स एभिन्यू खेल मैदानमा हुँदैछ । सन् २००३ मा सुरु भएको गोर्खा कप १६ औं वर्ष...	Read more
मोदी भम्रण नेपालका लागि आत्मघाती : डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख २८–२९ गतेसम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । तेस्रोचोटी नेपाल आएका मोदी जनकपुर, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ डुले भने काठमाडौंमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्...	Read more
धेरै चीज कमाएँ : संगीतकार बीबी अनुरागी
वरिष्ठ संगीतकार बीबी अनुरागी युकेमा आइपुगेका छन् । गायनबाट सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अनुरागी धेरै वर्षको संघर्षपछि नेपालको भर्सटाइल संगीतकारको रुपमा स्थापित भए । अद्भूत क्षमताकै कारण उ...	Read more
यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘ यातायात व्यवसायी सुध्रिएन भने जनताले नै कुट्नेछन्’
यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर (प्रेम) थापा काभ्रे समरथलीका हुन् । सिन्डिकेटलगायत यातायात क्षेत्रका यावत् समस्या समाधानका लागि उनले अभियान चालेको ८ वर्ष भयो । उनले राखेका मागमध्ये सिन्डिकेट अ...	Read more
पाराग्लाइडिङ वर्ल्ड कप पोखरामै हुनेछ
डिलबहादुर गुरुङ र भीमकुमारी गुरुङका एक्लो छोरा सविन गुरुङको जन्म ३५ वर्ष पहिले साविक भदौरे तामागी गाविस, सिधाने गाउँमा भएको हो । सानैदेखि केही नौलो र आँटिलो काम गर्न मन पराउने बानी रहेछ उनको...	Read more
क्होलासोंथरलाई विश्वसामु चिनाउनुपर्छ – एकेन्द्र गुरुङ
सल्लाहकार तथा संयोजक, क्होलासोंथर अध्ययन भ्रमण तमुधिं युके
गुरुङको ऐतिहासिक थलो क्होलासोंथर कास्कीमा पर्दछ । त्यहाँ पुग्ने मान्छेहरु विरलै भेटिन्छन् । यो सांस्कृतिक, मौलिकताको हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल हो । तथापि राज्यले अहिलेसम्म अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र उत्खनन् भने गरेको छैन । विगतमा केही प्रयत्न भए पनि सार्थकता पाउन सकेन । पछिल्लो समय तमुधिं युके नेतृत्वको टोली त्यो ठाउँको भ्रमण गरेको छ । क्होलासोंथरको अवस्था र अब कसरी संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ विषयमा भ्रमण टोलीमा सहभागी एकेन्द्र गुरुङसँग एभरेष्ट टाइम्सले जिज्ञासा राखेको थियो । प्रस्तुत छ, तमुधिं युकेका सल्लाहकार तथा क्होलासोंथर अध्ययन भ्रमण संयोजक एकेन्द्र गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
वैशाख पहिलो साता तपाईंहरु गुरुङको ऐतिहासिक थलो क्होलासोंथर पुग्नुभयो, विदेश बस्ने अनि ऐतिहासिक थलो सम्झने भन्ने प्रश्न उठ्ला नि ?
स्वदेशमा भन्दा प्रवासमा बस्दा आफ्नो देशको बढी माया लाग्छ । बढी बुझ्न मन लाग्छ र देशको वास्तविकता के हो भन्ने जिज्ञासा बढी हुन्छ । जहाँसम्म क्होलासोंथर अध्ययन भ्रमणको सन्दर्भ छ, हामी तमुधिं युकेको तर्फबाट त्यहाँ गएका हौं । तमुधिं युके जातीय संस्था हो, जातीय संस्थाको उद्देश्य भनेकै आफ्नो जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, जातीय पहिचानको बारेमा बुझ्न चाहने हुन्छ । क्होलासोंथर कस्तो रहेछ, हाम्रा पुर्खाहरु कसरी बसेका रहेछन् । त्यसबारे कतिसम्म अध्ययन गर्न सक्छौं, कतिसम्म बुझ्न सक्छौं भन्ने यावत् कुराका लागि हामी क्होलासोंथर गएका हौं ।
आफ्नो पुर्ख्यौली पैतृक थलो, आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता विकास भएको ठाउँमा हामी जानुपर्छ । त्यसलाई प्रमोट, उजागर गरेर विश्वसामु चिनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित हामी पुगेका हौं ।
आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको उद्गमथलो टेक्दाचाहिँ कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
त्यहाँ पुगेपछि अधिकांश साथीहरु भावुक बन्नुभयो । कसै कसैले त, मैले राम्रो सपना देखेँ भन्नुभयो । पुर्खाहरुले धेरै समय बिताएको ठाउँ, अहिले गुरुङको जतिपनि संस्कार संस्कृति छन्, त्यो त्यहींबाट विकासित भएको हो भन्ने कुराले हामी भावुक भयौं । हामी फेरि पनि आउनुपर्छ, यसलाई चिनाउनुपर्छ जस्ता खालका कुरा हाम्रा बीचमा भएको छ । त्यसमा हाम्रा तमुधिं युकेका अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङ, दुईजना उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तर, भ्रणम कार्यक्रम संयोजक म आफैं थिएँ । हामी अनुसन्धाता होइन र त्यस भ्रमण टोलीमा विज्ञ पनि कोही थिएनन् । तत्काललाई त्यो ठाउँ पुगौं भन्ने उद्देश्य मात्रै थियो हाम्रो ।
कस्तो रहेछ त त्यो भूगोल ?
त्यो ठाउँ समुद्र सतहबाट ३५ सय मिटरको उचाइमा छ । क्होलासोंथरमा हामीले तीनवटा गाउँका अवशेष देख्न सक्छौं । त्यो ठाउँ दक्षिणतिर मोहडा फर्केको छ । एकदमै जाडो हुन्छ । हिउँ परेको थियो । त्यहाँ राजाको दरबार, सभाघर (छोंजधिं) हामीले देख्यौं । घोडा बान्ने ठाउँ, तत्कालीन समयमा त्यहाँका ज्योतिषहरु, पच्यु, अग्रजहरु बसेर छलफल गर्ने र जोखना हेर्ने ठाउँ पनि हामीले देख्यौं । त्यसका अलावा तत्कालीन समयमा प्रयोग गरिएको ढिकीहरु, जाँतोहरु पनि हामीले देख्यौं ।
त्यहाँबाट उकालो दुई घण्टा हिँडेर चार हजार मिटरको उचाइमा एउटा गुफा रहेछ । त्यसको नाम ज्होम्स्यो उँ (ओडार) । त्यो ओडारमा तपस्या गरेर बस्ने रहेछ । अलि तल गएपछि राजाको घोडा दौडाउने ठाउँ पनि हामीले देख्यौं । तत्कालीन समयका राजदरबार र त्यो बेला बस्ती हुँदाको सम्पूर्ण कुराका अवशेष देख्न सक्छौं । भौगोलिक दृष्टिकोणले क्होलासोंथर दक्षिणतिर फर्किए तापनि एकदमै उचाइमा रहेको छ ।
त्यस्तो कष्टकर ठाउँमा कसरी सभ्यता विकास भयो होला ?
त्यो ठाउँमा कसरी मान्छे बसे होलान् भनेर हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्दैनौं । तर, पनि त्यहाँको भग्नावशेषलगायत सम्पूर्ण कुरा हेर्दा मान्छे पक्कै पनि बसेको हुनुपर्छ । हामीले यसमा मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङकै विकट ठाउँका गाउँहरु हेर्दा पनि मिल्दोजुल्दो भूगोल पाउँछौं । संसारमा नयाँ प्रविधि विकास नभएको अवस्थामा मान्छे त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ, बसेका रहेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौं ।
अध्ययन भ्रमणपछिको योजना के छ ?
बेलायतमा गुरुङहरुको भाषा, संस्कृति विकास गर्न, नयाँ पिढीमा हस्तान्तरण गर्नका लागि तमु फोरम संस्था खोलेका छौं । त्यो फोरममा गुरुङका भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई तीनटा भाषामा लेख्ने योजना बनाएका छांै । फोरमका दुइजना डाइरेक्टर पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु तमुधिं युकेसँग पनि अट्याचमेन्ट भएको अवस्था हो । हामीले अध्ययन भ्रमणमा देखेका र अनुभूत गरेका कुराहरुलाई जनसमक्ष ल्याउने कोसिस गर्नेछौं । तमुधिं युकेले पनि आफ्नो ढंगले काम गर्नेछ ।
क्होलासोंथरमा रहेको ढुंगा, गारो सबैका नाप, नक्सा हामीले ल्याएका छौं । बेलायत पुगेपछि सम्बन्धित विज्ञसँग परामर्श गरी नयाँ ढंगले यसबारे जानकारी गराउने उद्देश्य छ ।
देश, विदेशमा गुरुङ संघसंस्थाहरु दर्जनौं छन् । तर, यस्ता ऐतिहासिक थलो संरक्षण र प्रचारमा ध्यान दिन कमी भयो भन्ने लाग्दैन ? खाली सरकारले चासो दिएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ ?
वास्तवमा गुरुङ संघसंस्थाहरु यसमा सक्रिय हुनुपर्ने हो । संस्थाहरुले नसके सरकारलाई घचघच्याउनुपर्ने हो । त्यो भइरहेको अवस्था छैन । क्होलासोंथर प्रदेश नं. ४ को कास्कीस्थित मादीगाउँपालिकाको भूगोलमै पर्दछ । मादी गाउँपालिकाका सबै साथीहरु त्यहाँ जानुभएको थियो । बेलायतबाट आउने बेलामै क्होलासोंथरबारे अन्तक्र्रिया, गोष्ठी गर्ने हामीबीच कुरा भएको थियो । जब हामी क्होलासोंथर भ्रमण गरेर फर्कने क्रममा सिक्लेसमा प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङको विशेष आतिथ्यतामा, त्यहाँका सांसद, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, तमुधिं युके, तमुका सबै संघसंस्थाहरुको सहभागितामा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गर्‍यौं । क्होलासोंथरलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैको चासो रह्यो । त्यहाँ एउटा घोषणापत्र पनि तयार भएको छ । त्यसले पनि केही काम गर्छ होला ।
विगतमा पनि क्होलासोंथरको अध्ययन भए तर निष्कर्ष निकालिएन । फेरि पनि अनुसन्धानको काम टुंगोमा पुगिएन भने के अर्थ रहन्छ र ?
पहिले पहिलेका भग्नावशेषहरुको फोटो हेर्दा अग्लो, ठूलो जुन किसिमको देखिन्थ्यो, त्यो अहिले छैन । हामीले बाहिरी मुलुकमा हेर्दा जुन ठाउँमा पुराना, ऐतिहासिक कुराहरु जो छ, त्यसलाई अत्यन्तै संरक्षण गरेर राखिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गुरुङहरुको ऐतिहासिक थलोमा के कुरा अध्ययन भए, के कुरा उत्खनन् गर्‍यो भन्ने कसैलाई जानकारी छैन । त्यो जानकारी नहुँदानहुँदै पनि त्यहाँ हिँड्ने मान्छे, त्यहाँका गोठालाले ढुंगाहरु उप्काएर फालिदिने, सबै कुरा लथालिंग पारिदिने काम भइरहेको छ । हामी गएर त्यसरी फाल्न भएन, संरक्षण गर्नुपर्‍यो भन्नुपर्छ ।
लमजुङका घनपोखरा, नाम्दुङ र घलेगाउँका स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको छ क्होलासोथर छ । गोठलाँदा त्यहाँको ढुंगा छुन भएन अनि त्यो ठाउँमा अध्ययन भ्रमणमा जानेहरुका लागि पौवा बनाइएको छ, त्यो अन्यत्रै बनाउनुपर्‍यो । नयाँ संरचना बनाउँदा त्यहाँका भग्नावशेषका ढुंगा छुन भएन । टाढैबाट ल्याउनुपर्‍यो । त्यहाँको आकार, ढुंगा, रुख सबै चिजको महत्व हुन्छ । त्यहाँका ढुंगाहरु फलामले कुँदेर बनाइएको छ । यसमानेमा त्यहाँ फलामको विकास भइसकेको रहेछ । धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कमसेकम त्यो म्यासेज हामी दिन्छौं । हामीले धेरै कुरा दिन नसके पनि सानोतिनो सन्देश चाहिँ दिएका छौं ।
तपाईहरुको भ्रमणपछि क्होलासोंथरको संरक्षण र विकास हुने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म एकदम आशावादी छु । अहिले मुलुक संघीयतासहितको नयाँ संरचनामा गइरहेको छ । र, प्रत्येक गाउँपालिका, गाउँसभालाई यो अधिकार छ । हामी तमुवानको कुरा गरिरहेका छौं, तमुहरुको पहिचानको कुरा गरिरहेका छौं भने आफ्नो थातथलो बारेमा, आफ्नो इतिहासबारेमा कमसेकम कुरा उठाएका छौं । हामी पुगेर आयौं, यो विषय सबै तहतप्कामा सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यत्तिमात्रै नभएर संसारको कुनै पनि ठाउँमा, जहाँ तमुहरु बसेका छन्, नेपाली बसेका छन् त्यहाँ यो सन्देश गएको छ, जान्छ । कुनै न कुनै क्षेत्र र तहबाट यसको संरक्षणमा केही काम अवश्य हुन्छ भन्ने हामीलाई
लागेको छ ।
क्होलासोथरको विकास र संरक्षण हुन नसक्नुमा विकट भएकोले हो ?
एकदमै विकट ठाउँ हो । त्यो ठाउँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ । लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ संसारकै सबैभन्दा राम्रो पर्यटन रुटमा पर्छ । तर, क्होलासोंथरमा कोही पर्यटक पुग्छ न कोही मान्छे नै । पुग्ने भनेका गोठाला हुन् । र, हिउँद लागेपछि आदिम्थलो भन्नेहरु अध्ययन गर्न जान थालेका छन् । त्यसकारण त्यहाँ पुग्न मान्छे विल्कुलै कम हुन्छ ।
अब त्यहाँ पुग्न प्रत्येक गाउँपालिकाका साथीहरु चाहे त्यो क्होलासोंथरका किन नहोस्, चाहे मादी गाउँपालिकाको नै किन नहोस् । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट त्यहाँ पुग्ने बाटो मर्मत र निर्माण गर्नुपर्छ ।
त्यहाँ कुन कुन बाँटो हुँदै जान सकिन्छ ?
क्होलासोंथर घनपोखरा, भुुजुङ, पसगाउँबाट पनि पुग्न सकिन्छ । भाचोक, याङ्जाकोट, ताङतिङ र सिक्लेसलगायत सबै ठाउँबाट त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । सबभन्दा छोटो बाटो सिक्लेसबाट हो । तर, त्यो बाटो एकदमै उकालो, अप्ठ्यारो छ । त्यो बाटोलाई विस्तार र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
त्यत्तिमात्रै होइन, प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो ठाउँबाट त्यहाँ पुग्ने सहज बाटो निर्माण गर्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा धर्मशाला, पाटीपौवाको निर्माण गर्नुपर्छ ।
भनेपछि पर्यटनको राम्रो सम्भावना पनि छ ?
त्यो एकदमै सम्भावना देखेको छु । बेवसाइट बनाएर संसारभरिका मान्छेहरुलाई क्होलासोंथरको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । बाहिर बस्ने नेपालीका छोराछोरी अर्थात् नयाँ पिढीहरु संसारका नयाँ ठाउँमा घुम्न चाहन्छन् । त्यहाँ जाने बाटो अलि राम्रो बनाउनुपर्छ । बाटोमा पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाटीपौवा नभए पनि कमसेकम पाल टाँगेर बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गर्‍यौं भने धेरै मान्छे त्यहाँ आउने वातावरण बन्छ ।
एक करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ : पूरन गिरि
पर्वत अन्तर्राष्ट्रिय समाजले आउँदो ३ जुन १८ का दिन अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा वृहत च्यारिटी कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । सन् २०१७ सालको अक्टोबर महिनामा काठमाण्डौंमा सम्पन्न विश्वभरका पर्...	Read more
टान अध्यक्ष नवराज दाहाल भन्छन्, ‘नेपाललाई पर्यटनको पहिलो गन्तव्य बनाउनुपर्छ’
हरेकजसो सरकारले देशको समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई मुल आधार मान्दै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, लाखौं पर्यटक भित्र्...	Read more
काउन्सिलर पदकी उम्मेदवार लीला भन्छिन्, ‘हौसला दिनुहोस्’
पछिल्लो समय बेलायती राजनीतिमा पनि नेपालीहरुको उपस्थिति बक्लिदै छ । स्थानीय काउन्सिलरदेखि एमपीसम्म उम्मेदवार बन्नेक्रम बढ्दो छ । कतिपय नेपाली काउन्सिलर मेयरसम्मको पदमा समेत पुगिसकेका छन् भने...	Read more
जनजातिका सवालहरु सम्बोधन गर्नैपर्छ : योगराज वनेम लिम्बू
आफ्ना समुदायको चाडमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा सरकारले कटौती गरेको भन्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित छन् । राष्ट्रिय विविधतालाई स्वीकारेर ल्होछार, माघी, उधौली, उभौलीलगायत चाडका बिदा...	Read more